Mmebi Mmiri iPhone: Ntuzi Kasịnụ Na Otu Esi Edozi Mmebi Liquid - Iphone
otu esi edegharị ederede niile na iphone
iphone 6 m rapaara na ọnọdụ mgbake
amaokwu Akwụkwọ Nsọ gbasara ịkụziri ụmụaka ihe
nrọ nrọ nke ịtụrụ ime
Mmebi Mmiri iPhone: Ntuzi Kasịnụ Na Otu Esi Edozi Mmebi Liquid
Inweta ezigbo nzọụkwụ mbụ nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti ndụ na ọnwụ maka iPhone na mmiri mmiri mmebi. O di nwute, enwere otutu ihe omuma na ntaneti banyere ihe n'ezie na-arụ ọrụ mgbe ọ na-abịa ịnapụta mmiri mmiri mebiri emebi iPhone.
N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe na-akpata iphone mmiri mmebi ma gosi gị esi lelee ya . Anyị ga-ekwu maka ya mgbaàmà nkịtị nke mmebi mmiri , ihe-eme ozugbo idobe ihe iPhone na mmiri , esi ekpebi ma idozi mmiri mebiri emebi iPhone ma ọ bụ zụta nke ọhụrụ .
Liquid Mebiri-eme Mgbe ast na-adịkarị Anya Ya
Kedu ihe Mmebi Mmiri iPhone Dị?
Mgbaàmà nke iPhone Mmebi Mmiri
Olee otú iPhone Water Mebiri Occur?
Mberede! Naanị M Tụrụ iPhone M na Mmiri. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Ihe Do Ga-Eme Mgbe iPhone Gị Nweta Mmiri
Ihe Ikwesighi Ime: Echiche Watergha Mmebi Mmiri
Nwere ike iPhone Mebiri emebi Mmiri?
M Kwesịrị Imezi My iPhone Ma ọ bụ Zụta A New Otu?
iPhone Mmebi Mmezi Nhọrọ
Enwere m ike Ree A Water mebiri emebi iPhone?
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ ama esịn gị iPhone na mmiri na ị chọrọ ozugbo enyemaka, mafere na Ngalaba Mberede ịmụta ihe-eme mgbe iPhone na-gụrụ mmiri mmiri.
A na-akpọsa iPhone ọ bụla kemgbe 7 dị ka mmiri na-eguzogide mmiri, mana nke a ekwesịghị ịbụ ihe mgbagwoju anya na enweghị mmiri. Anyị ga-abanyekwu na ọkwa IP na ọdịiche dị n'etiti mgbochi mmiri na mmiri na-eguzogide mmiri ma emechaa n'isiokwu a.
Na nkenke (a ga-enwe puns), mmebi mmiri na-apụta mgbe mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri ọzọ na-abanye na kọntaktị elektrọnik nke nwere mmiri nke iPhone. Agbanyeghị na iPhones ndị ọhụrụ anaghị enwecha ike ibibi mmiri karịa ụdị ochie, obere ntakịrị mmiri mmiri bụ naanị ihe ọ ga - eme iji mebie iPhone enweghị mmezi.
Ihe mgbochi na-eguzogide mmiri na iPhones ọhụrụ dị ka ọ dị mfe iyi na dọkatụrụ adọka ka ekwentị ndị ọzọ. Emere ya iji gbochie mmiri, mana ọ bụghị ọtụtụ mmiri mmiri, mmiri mmiri, na gels nke ọtụtụ n'ime anyị na-eji kwa ụbọchị.
Liquid emebi nwere ike ịbụ ihe doro anya ma ọ bụ adịghị ahụ anya. Mgbe ụfọdụ, ọ na-egosi dị ka obere egosipụta n'okpuru ihuenyo ma ọ bụ corrosion na-achagharị n'ime ya odori n'ọdụ ụgbọ mmiri. Otú ọ dị, mmebi mmiri iPhone anaghị adịkarị ka ihe ọ bụla - ma ọ dịkarịa ala site na mpụga.
Etu esi lelee iPhone Mmebi Mmiri
Zọ kachasị mma iji lelee mmebi mmiri iPhone bụ ile anya na njirimara kọntaktị mmiri ya, ma ọ bụ LCI. Na iPhones ndị ọhụrụ, LCI dị n’otu oghere dị ka kaadị SIM. Na ụdị ochie nke iPhone (4s na mbụ), ị ga-ahụ LCIs na jaketị isi, na-akwụ ụgwọ ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ abụọ.
Nke a bụ ebe ị ga - ahụ ihe ngosi kọntaktị mmiri mmiri na iPhone ọ bụla:
iPhone 12 Pro / 12 Pro Max Oghere Kaadị SIM
iPhone 12/12 Obere Oghere Kaadị SIM
iPhone 11 Pro / 11 Pro Max Oghere Kaadị SIM
iPhone 11 Oghere Kaadị SIM
iPhone SE 2 Oghere Kaadị SIM
iPhone XS / XS Max Oghere Kaadị SIM
iPhone XR Oghere Kaadị SIM
iPhone X Oghere Kaadị SIM
iPhone 8/8 gbakwunyere Oghere Kaadị SIM
iPhone 7/7 gbakwunyere Oghere Kaadị SIM
iPhone 6s / 6s gbakwunyere Oghere Kaadị SIM
iPhone 6/6 gbakwunyere Oghere Kaadị SIM
iPhone 5s / 5c Oghere Kaadị SIM
iPhone Ghaat Oghere Kaadị SIM
iPhone 5 Oghere Kaadị SIM
iPhone 4s Igweisi Jack & Charging Port
Ekwentị 4 Igweisi Jack & Charging Port
iPhone 3GS Igweisi Jack & Charging Port
iPhone 3G Igweisi Jack & Charging Port
iPhone Isi Igwe Jack
Etu esi lelee LCI n'ime Oghere Kaadị SIM
Iji lelee LCI na iPhone ọhụrụ, jiri mpempe akwụkwọ wee gbapụta tray SIM, nke dị n'okpuru bọtịnụ n'akụkụ (bọtịnụ ike) n'akụkụ aka nri nke iPhone gị. Jide mkpirisi akwụkwọ ahụ n’ime obere oghere ahụ. You nwere ike mkpa pịa ala na ụfọdụ ịchụpụ SIM tree.
Cheta na: Ọ dị mkpa iji jide n'aka na mpụga nke gị iPhone bụ kpam kpam nkụ tupu ị wepụ SIM tree. Ọ bụrụ na ị danyere iPhone gị na mmiri mmiri ma ọ ka dị mmiri, gbagoo na ngalaba anyị banyere ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na iPhone abanyela na mmiri.
Next, wepụ SIM tree na SIM kaadị, ma jide gị iPhone na ihuenyo ihu ala. Site n'akụkụ a, jiri tọọchị lee anya n'ime oghere kaadị SIM ma lelee LCI. Dị ka anyị ga-atụle mgbe e mesịrị, ọ ka mma ịhapụ iPhone mmiri ihu na ala dị larịị karịa ihu elu.
Etu esi lelee LCI Inside Headphone Jack Ma ọ bụ Charging Port
Ọ dị mfe ịhụ LCI na iPhones ndị okenye. Na-enwu ọkụ na ọkụ ọkụ na iPhone ma ọ bụ na-ebugharị ọdụ ụgbọ mmiri gị, dabere na ụdị nke ị nwere.
Kedu ihe LCI dị?
Oke na ọdịdị nke LCI nke iPhone dịgasị iche site n'ụdị na ụdị, mana ọ na-adịkarị mma ịkọ ma ọ bụrụ na LCI 'adaala', dịka anyị na-ekwukarị na Ogwe Genius. Chọọ obere akara ma ọ bụ ntụpọ dị n’ime ọnụ oghere kaadị SIM, na ala nkedo okwu ntị, ma ọ bụ n’etiti njikọ ọdụ ụgbọ mmiri (ọdụ ụgbọ mmiri) na iPhones mebere ochie.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na LCI m acha uhie uhie?
LCI na-acha uhie uhie na-egosi na iPhone gị abanyela na mmiri mmiri, ma ọ dị mwute, nke ahụ pụtara na ị ga-akwụ ụgwọ. ’Ll ga-akwụ ụgwọ obere ma ọ bụrụ na ị nwere AppleCare + ma ọ bụ mkpuchi ụgbọelu karịa ma ọ bụrụ na ịnweghị mkpuchi ma ọlị.
Anyị ga-abanye na ọnụahịa na otu esi ekpebi ma ọ ga-edozi ma ọ bụ dochie mmiri mebiri emebi iPhone n'okpuru. Ma enwela olileanya. Naanị n'ihi na ịgụ LCI apụtaghị na iPhone agaghị alaghachi na ndụ.
Kedu ihe m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na LCI bụ pink?
O di nwute, pink bu ndo di nma nke acha uhie uhie. Ma LCI dị ọkụ ma ọ bụ ọbara ọbara ọbara, iPhone gị nwere ụdị mmebi mmiri mmiri ma agaghị ekpuchi ya n'okpuru akwụkwọ ikike.
Gini ka m kwesiri ime ma oburu na LCI bu odo?
Ọ bụ ezie na ọ naghị eme ọtụtụ oge, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na LCI gị apụta dị ka odo. Ozi ọma ahụ bụ na edo edo adịghị acha ọbara ọbara, nke pụtara na iPhone gị emerụbeghị mmiri mmiri.
Substancefọdụ ihe ndị ọzọ (egbe, unyi, lint, wdg) nwere ike imebi LCI nke iPhone gị. Anyị na-akwado ịnwa ihicha oghere kaadi SIM, ọkpọkọ isi okwu, ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na-eji ahịhịa mgbochi ma ọ bụ ncha ezé ọhụrụ.
Ọ bụrụ na LCI anọgide na-acha odo odo, ọ gaghị afụ ụfụ iwepu iPhone gị na Storelọ Ahịa Apple! Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ dịghị ihe na-adịghị mma na iPhone gị, ọ nweghị ọtụtụ ihe Apple tech ga-eme.
A ga - ekpuchi iPhone m n’okpuru akwụkwọ ikike ọ bụrụ na LCI ya ka dị ọcha?
Ọ bụrụ na LCI dị ọcha ma ọ bụ ọlaọcha, mbipụta nke iPhone gị na-enwe nwere ike ọ gaghị enwe njikọ mmiri. Ọ bụrụ n ’idebe iPhone gị n’ime ọdọ mmiri tupu ọ kwụsị ọrụ, ọ nwere ike bụrụ. Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụrụ na Apple enweghị ike igosi na iPhone mebiri emebi, akwụkwọ ikike gị ka nwere ike ịdị.
Otú ọ dị, naanị na LCI adịghị acha ọbara ọbara apụtaghị na Apple ga-ekpuchi iPhone n'okpuru akwụkwọ ikike. Ọ bụrụ na enwere ihe akaebe nke mmiri mmiri ma ọ bụ mmebi n'ime iPhone, Apple techs nwere ike ịgọnahụ mkpuchi mkpuchi - ọbụlagodi na LCI ka na-acha ọcha.
Enwetala echiche ọ bụla Funny
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụ LCI na-acha uhie uhie na ụjọ. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-anwa iji ihe na-acha ọcha na-ekpuchi LCI, ndị ọzọ na-ewepụkwa ya na tweezers abụọ. Emela ya! E nwere ezi ihe abụọ mere na ị gaghị anwa ịghọ aghụghọ ule:
Enwere ezigbo ohere ị ga - emebi iPhone gị karịa site na ịmịpụ LCI.
Apple techs na-ahụ LCI ụbọchị niile, kwa ụbọchị. Ọ dị mfe ịkọ ma LCI anaghị efu. Ọ bụrụ na etinyere LCI, iPhone na-esite n'onye na-esighi ike nweta ọkwa ikike. Ekwentị ọhụrụ na ọnụahịa mkpọsa zuru ezu na-efu ọtụtụ narị dollar karịa ihe gbanwere na akwụkwọ ikike na Genius Bar.
Kedu ihe dị iche n'etiti 'na akwụkwọ ikike' na 'akwụkwọ ikike efu'?
Ọ bụrụ na ị were iPhone nke mmiri mebiri emebi gaa na Storelọ Ahịa Apple, enwere ike ịgwa gị na ọ 'si na ikike.' ’Ll ga-akwụ ụgwọ nke ukwuu iji dochie iPhone gị ma ọ bụrụ na ị nwere AppleCare +, mana ọbụlagodi na ịnweghị, dochie iPhone na-enweghị akwụkwọ ikike dị ọnụ ala karịa ịzụta nke ọhụrụ.
Ọ bụrụ na akwụkwọ ikike iPhone gị 'abaghị uru', nke ahụ dị njọ. Apple abụrụla iPhone nwere akwụkwọ ikike efu. Ha agaghị arụkwa ya na Genius Bar. Naanị nhọrọ gị ga - abụ ịzụta iPhone ọhụrụ na ọnụahịa mkpọsa zuru ezu.
N'ikwu okwu n'ozuzu, naanị ụzọ ị ga-esi mee ka akwụkwọ ikike iPhone gị ghara imebi bụ ịgbagha ya. Ọ bụrụ na iwepu LCI, ọ na-ewepu ikike. Ọ bụrụ na ị were ya iche wee hapụ ịghasa, ọ na-efu ikike.
Ma ọbụlagodi na ị ga-akụtu ya na mberede, tụba ya n’ọdọ mmiri, ma ọ bụ jiri ụgbọ ala gị gbaba ya (ahụrụ m ihe ndị a niile), ị naghị eme ihe ị na-ekwesịghị ime. (Ma ọ dịkarịa ala, dị ka Apple si kwuo.) N'okwu ndị ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ maka nnọchi ma ọ bụ rụzie 'si na akwụkwọ ikike'.
Mmebi mmiri nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu na iPhone. Ozugbo mmiri mmiri batara, o siri ike ịmata ebe ọ ga-agbasa ma ọ bụ ụdị mmebi ọ ga-akpata. N'okpuru ebe a, anyị edepụtara ọtụtụ n'ime ihe mgbaàmà kachasị nke mmebi mmiri iPhone.
Ọ bụrụ na iPhone gị na-ekpo ọkụ
Batrị lithium-ion mmiri mebiri emebi nwere ike ịmị ezigbo ọkụ. Ọ bụ ezie na ọ dị oke ụkọ (ọkachasị maka iPhones), batrị ion ion lithium nwere ike ijide ọkụ mgbe ha mebiri emebi. Applelọ ahịa Apple ọ bụla nwere nchekwa ọkụ na Genius Room. M mgbe nwere iji ya, ma kpachara anya ma ọ bụrụ na ị na-eche gị iPhone ịmalite ikpo ọkụ dị ọkụ karịa ka ọ dị.
Ọ bụrụ na enweghị ụda na iPhone gị
Mgbe mmiri bara n'ime iPhone ma kpatara mmebi, ndị na-ekwu ya nwere ike ịrụ ọrụ ma mebie ikike ịkpọ ụda. Nke a nwere ike imetu ike gị ige egwu, ịnụ ụda mgbe mmadụ na-akpọ gị, ma ọ bụ ịkpọ oku nke gị site na iji igwe okwu.
Dị ka mmiri na-amalite ikusi site gị iPhone, ya okwu nwere ike dịghachi ndụ. Ọ bụrụ na ha na-ada ụda ma ọ bụ na-ada ụda na mbido, ụda ụda ahụ nwere ike ịka mma karịa oge - ma ọ bụ ọ nwere ike ọ gaghị.
Anyị enweghị ike ijide n’aka na ọ ga - enyere aka, mana Apple Watches kachasị ọhụrụ na - eji ndị ọkà okwu arụ n’ime ụlọ chụpụ mmiri mgbe emesịrị ha. Nwere ike na-arụ ọrụ a maka iPhone? Anyị ejighị n'aka, mana ọ bụrụ na ọkà okwu na-eme ụda ọ bụla ma ọlị, ọ gaghị enwe ike imerụ ahụ iji bulie olu ahụ wee gbalịa.
Ọ bụrụ na iPhone gị anaghị akwụ ụgwọ
Otu n'ime ihe ndị kasị na ọtụtụ na-akụda iPhone nsogbu na-eme mgbe ọ agaghị ana ego . Ọ bụrụ na mmiri abanye na ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị (ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ), ọ nwere ike ibute mmebi ma gbochie iPhone gị inwe ike ịkwụ ụgwọ niile.
Gbalịa ichaji iPhone gị n'ọtụtụ eriri na ọtụtụ chaja tupu ị bia nkwubi okwu a. Otú ọ dị, ọ bụrụ na LCI na-acha ọbara ọbara ma iPhone gị anaghị akwụ ụgwọ, mmebi mmiri mmiri nwere ike ịbụ ihe kpatara ya.
Ọ bụrụ na ị gbalịrị iji osikapa kpoo iPhone gị tupu ị gụọ isiokwu a (nke anyị na-akwadoghị), were tọọchị ma lee anya n'ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ. Ọtụtụ mgbe, ahụrụ m otu osikapa rapaara n'ime. Egbula ịmịnye eriri USB Lightning n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ ma ọ bụrụ na ọ naghị abanye n'ụzọ dị mfe. Kama, jiri ihe ntanye eze ị na-emetụbeghị jiri nwayọ hichaa irighiri ihe.
Mgbe ọ na-agaghị ekwe omume iwepụ osikapa n'emebighị ngwa elektrọnik, ekwentị nke nwere ike ịmaliteghachi na ndụ ga-anọchi. Otu enyi nwoke nke nwere nsogbu a gbaziri ngwa ngwa ịkpụpụta ngwa ọrụ n’aka otu enyi ya iji wepụ ọka osikapa, ọ rụpụtara ihe! Anyị anaghị atụ aro ka ị jiri ọla ọ bụla, agbanyeghị, belụsọ dị ka ụzọ ikpeazụ.
Ọ bụrụ na iPhone gị amataghị kaadị SIM
Ihe Kaadị SIM bụ ihe na-echekwa data na iPhone gị nke na-enyere gị ụgbọelu gwa ya iche na ekwentị ndị ọzọ na netwọkụ ya. Ozi dị ka ikike igodo nke gị iPhone na-echekwa na kaadị SIM. Igodo ndị a na-enye gị iPhone ohere ịnweta nkeji, ozi, na data nke atụmatụ ekwentị gị.
Gị iPhone nwere ike ọ gaghị enwe ike ijikọ na netwọọdụ cellular gị na-ebu ma ọ bụrụ na mmiri mmiri emerụla kaadị SIM ma ọ bụ traị kaadị SIM. Otu ihe ịrịba ama na kaadị SIM gị ma ọ bụ SIM tray emebiwo site na kọntaktị mmiri mmiri ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu 'No SIM' na aka ekpe aka ekpe nke ngosipụta iPhone gị.
Ọ bụrụ na ị pụrụ ịchịkwa ekwe omume nke a software ma ọ bụ ụgbọelu-metụtara nsogbu na-akpata gị iPhone na-ekwu Mba SIM , ị nwere ike mkpa ka nwere ya SIM kaadị ma ọ bụ SIM kaadị tree.
Ọ bụrụ na gị iPhone enweghị Ọrụ
Mgbe mmebi mmiri na-emetụta antenna iPhone, ọ gaghị enwe ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ dara ogbenye. Kedu ụzọ ọ bụla, iPhone abụghị iPhone ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkpọ oku ekwentị. Ihe ederede anyi nwere ike inyere gi aka idozi nsogbu ogbenye ma ọ bụ enweghị ọrụ na iPhone.
Ọ bụrụ na Apple Logo na-egbu maramara na gị iPhone
Otu ihe ịrịba ama na gị iPhone nwere ịrịba mmiri mmebi bụ ma ọ bụrụ na ọ na-rapaara na-egbu maramara na Apple logo. Mgbe ọ na - eme, ọ ga - ekwe omume nke gị iPhone araparawo na ịmalitegharị aka .
Gbalịa ịtọgharị iPhone gị iji hụ ma ị nwere ike idozi nsogbu ahụ. Nke a bụ otu esi emezigharị iPhone gị, dabere na ụdị nke ị nwere:
Olee otú Iji Ike Tọgharia An iPhone 6s na Tupu elsdị
N'otu oge pịa ma jide bọtịnụ Home na bọtịnụ ike ruo mgbe ihuenyo gosipụtara na oji na akara Apple gosipụtara. Can nwere ike hapụ abụọ mkpọchi mgbe ị na-ahụ Apple logo na ngosipụta nke gị iPhone.
Olee otú Iji Ike Tọgharia An iPhone 7
Pịa ma jide bọtịnụ olu ala na bọtịnụ ike n'otu oge ahụ ruo mgbe akara logos Apple gosipụtara na ihuenyo nke iPhone gị. Hapụ bọtịnụ abụọ ahụ ozugbo akara Apple gosipụtara.
Etu esi esi ike ịtọgharịa iPhone 8 na ụdị ọhụụ
Ngwa ngwa pịa ma hapụ bọtịnụ olu elu, wee pịa ngwa ngwa ma hapụ bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ngosipụta ahụ. May nwere ike ijide bọtịnụ na iPhone gị maka sekọnd 25-30, ya mere nwee ndidi ma adala mbà n'oge na-adịghị anya!
Ọ bụrụ na Apple Logo Nọgidesiri Na Ihuenyo
Mgbe ị gbanye iPhone gị, ọ na-ajụ akụkụ niile, “you nọ ebe ahụ? Ị nọ ebe ahụ?' Gị iPhone nwere ike ịrapara na akara Apple ma ọ bụrụ na naanị otu n’ime ihe ndị ahụ anaghị azaghachi.
Ọ bụrụ na gị na iPhone kemgbe rapaara na akara Apple ruo ọtụtụ minit, gbalịa nrụpụta siri ike site na iji usoro anyị kọwara na akara ngosi gara aga.
Ọ bụrụ na igwefoto iPhone gị anaghị arụ ọrụ
Ihe Igwefoto iPhone nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ kpamkpam ma ọ bụrụ na mmiri mmiri abanye na igwefoto. Ọbụna ma ọ bụrụ na igwefoto na-arụ ọrụ, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka iPhone mebiri emebi mmiri blurry foto . Nke ahụ na-eme mgbe mmiri na-egbochi lens ahụ ma ọ bụ ihe fọdụrụnụ mgbe ọ nwụsịrị.
Enwere ohere na ọ bụrụ na ịhapụ iPhone gị naanị obere oge, igwefoto nwere ike ịrụ ọrụ ọzọ. Ọ bụrụ na foto gị ka na-agbapụ agbapụ ka ụbọchị ole na ole gachara, ịnwere ike rụzie igwefoto gị.
iphone 6 rapara na ịchọ
Ọ bụrụ na iPhone gị enweghị ike ma ọ bụ na ọ naghị agbanye
Mbibi mmiri na-abụkarị ihe kpatara nsogbu ngwaike dị egwu na gbochie gị iPhone ka ịgbanwuo ma na-arụ ọrụ ma ọlị.
Mmebi mmiri nwere ike igbochi ike inye iPhone gị ma ọ bụ njikọ batrị nke iPhone gị na bọọdụ mgbagha. Ọdụ mmiri nke Lightning dị na ala nke iPhone gị dịkwa nfe na mbibi mmiri. Enweghị ohere ike, gị iPhone agaghị akwụ ụgwọ , ọ gaghị agbanye.
“Nke a mere na iphone m 4. M tụbara ya na mmiri na-emighị emikpu ihe dị ka sekọnd 15, ọ gbanyeghịkwa ọzọ. Ekwesịrị m iji ekwentị tụgharịa n'oge okpomọkụ ahụ dum. ”
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ, maọbụ ọ bụrụ na ịchọghị ikpuchi ndị enyi gị, otu mpempe eletriki ojii nwere ike ịbụ 'ndozi' dị irè nwa oge.
Ọ bụrụ n ’iPhone Echere ekweisi gị
Gị iPhone nwere ike gụọ na ekweisi na-agbanye n'ime ụda isi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning ma ọ bụrụ na mmiri abanyela n'ime oghere ndị a. Mgbe nke a mere, gị iPhone nwere ike ịrapagidesi ike na ekweisi mode . Ọnụnọ nke mmiri mmiri nwere ike ịghọgbu iPhone gị na-eche na ekweisi na-agbanye ọ bụrụgodị na ha abụghị.
Ọ bụrụ na gị iPhone ihuenyo bụ Black
Nsogbu ọzọ ndị mmadụ na-enwekarị mgbe ha batara na Storelọ Ahịa Apple bụ nke ha Ihuenyo iPhone ga-abụ oji , ma ihe ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ha nwekwara ike ịnụ mkpọtụ ndị na-ekwu okwu na-eme!
Mgbe nke a mere, ọ na-apụtakarị na eriri LCD anaghị adị mkpụmkpụ, na-eme ka ihuenyo ahụ dị oji. Can nwere ike gbalịsie ike ịtọgharịa iPhone gị, mana ọ bụrụ na eriri LCD eghe, ọ gaghị edozi nsogbu ahụ.
Mmebi Mmiri Site na Steam
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, iPhone gị nwere ike ịnweta mmebi mmiri site na uzuoku, nke anyị nụrụ nwere njikọ ụfọdụ na mmiri. (A egwuregwu.) Apple na-atụ aro ka ị ghara iji iPhone gị n'ebe dịka sauna ma ọ bụ gburugburu ọ bụla nwere oke iru mmiri.
Steam nwere ike creep ya ụzọ n'ime oghere gị iPhone na condensate ozugbo ọ odụk. Mgbe uzuoku na-ekpuchi, mmiri nwere ike gbasaa n'ime ime iPhone gị.
Mmiri Nwere Ike Iweta iPhone Mmebi Mmiri?
Ee, mmiri ozuzo, ụdị mmiri ọzọ, nwere ike ibute mmebi mmiri iPhone. Ọ bụ ezie na iPhone ọ bụla ebe ọ bụ na iPhone 7 bụ mmiri na - eguzogide mmiri, ọbụnadị ntakịrị mmiri mmiri nwere ike imebi mmiri. Ọ gwụla ma iPhone gị nọ n'ọnọdụ zuru oke, anyị na-akwado ka ị zere iji iPhone gị na ihu igwe ihu igwe. Mmiri mmiri ozuzo nwere ike ịbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri ma kpatara ọtụtụ mbibi.
Ikwesiri ịkpachara anya banyere iji ekweisi waya na mmiri ozuzo, karịchaa ma ọ bụrụ na ị nwere okenye iPhone. Mmiri nwere ike na-agba ọsọ na wires gị ekweisi n'ime ekweisi jaak ma ọ bụ Lightning n'ọdụ ụgbọ mmiri nke gị iPhone na-eme ka mmebi ozugbo n'ime.
Mmebi Mmiri Site na Mgbatị Ọsụsọ
Gị iPhone nọ n'ihe ize ndụ nke mmebi mmiri ma ọ bụrụ na ị jiri ekweisi awụnyere na mgbatị ahụ. Ọ bụrụ na ị jiri ekweisi nwere eriri, ọsụsọ nwere ike ịgbada na waya wee banye ụda isi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri. Iji zere nsogbu a kpamkpam, bulie otu ụzọ ekweisi Bluetooth. Enweghị wires, nsogbu adịghị!
Nnu Mmiri nnu nwere ike imebi iPhone gi?
IPhones ọhụrụ nwere ike iguzogide mmiri, mana ha anaghị egbochi mmiri nnu. Mmiri nnu na ihe iyi egwu ọzọ na mmiri mgbe niile adịghị - corrosion.
Mmiri nnu nwere ike imebi ihe dị n'ime ngwaọrụ gị, nke na-agbakwunye ihe mgbochi ọzọ n'elu mbibi mmiri. O siri ike ikwacha ma ọ bụ dozie akụkụ corro nke iPhone. Nwere ike nweta ihe ndị arụ arụ gbanwere, ma ọ bụ dochie ekwentị gị niile.
Kedu otu ngwa ngwa mmiri mebiri emebi?
Ọ ga-eju gị anya na mmiri ole ga - aba n'ime iPhone, ọbụlagodi mgbe obere oge gachara. Ndị ahịa na Genius Bar ugboro ugboro amaghị maka ihe kpatara iPhone ha ji kwụsị ọrụ na mberede - ma ọ bụ ya mere ha kwuru. Cheedị ihe ijuanya ha nwere mgbe m gosiri ha ọdọ mmiri nke dị n'ime iPhone ha ka m meghere ya!
Mana echere m na iPhone m enweghị mmiri!
Phoneskpọsa ekwentị dị ka mmiri na-eguzogide mmiri bụ ụzọ dị ebube dị irè, n’ihi na ọ na-eme ka ndị mmadụ kwenye na ha bụ ndị na-enweghị mmiri. Ma ha abụghị.
A na - egosiputa mmiri na - eguzogide iPhones site na Ingress Progression, nke akpọrọ an IP ọkwa . Ntụle a na-agwa ndị ahịa etu mmiri na ikuku na-eguzogide ekwentị ha, yana nkọwa dị iche iche maka ọkwa ọ bụla.
Ekwenyeghi iPhone tupu 6s. Ihe iPhone 7, 8, X, XR, na SE 2 bụ IP67 . Nke a pụtara na ekwentị ndị a na-eguzogide uzuzu na mmiri na-eguzogide mmiri mgbe mmiri ruru mita 1 na mmiri ma ọ bụ obere.
Ọhụrụ ọ bụla iPhone kemgbe iPhone XS (ewepu iPhone SE 2) ka akara akara IP68. Ezubere ụfọdụ ka ha bụrụ ihe na-eguzogide mmiri mgbe mmiri mikpuru n’ime ala karịa mita 2 ruo ihe dị ka nkeji iri atọ. Ndị ọzọ, dị ka iPhone 12 Pro, nwere ike iguzogide mmiri mgbe mmiri mikpuru ya ruo mita isii!
Apple kwukwara na IP68 iPhones nwere ike na-eguzogide ọgwụ site na ihe ọ householdụ drinksụ ezinụlọ dị ka biya, kọfị, ihe ọ juiceụ juiceụ, soda, na tii.
Ọzọkwa, Apple anaghị ekpuchi mmebi mmiri mmiri maka iPhones, yabụ anyị anaghị atụ aro ka anyị jiri aka nwalee ụkpụrụ ndị a n'onwe gị!
iPhone 6s & tupu Eleghị ya NA NA NA NA
iPhone 7 IP67 Nchedo zuru oke Ruo 1 mita miri emi maka 30 nkeji
iPhone 8 IP67 Nchedo zuru oke Ruo 1 mita miri emi maka 30 nkeji
iPhone X IP67 Nchedo zuru oke Ruo 1 mita miri emi maka 30 nkeji
iPhone XR IP67 Nchedo zuru oke Ruo 1 mita miri emi maka 30 nkeji
iPhone SE 2 IP67 Nchedo zuru oke Ruo 1 mita miri emi maka 30 nkeji
iPhone XS IP68 Nchedo zuru oke Ruo mita abụọ miri emi ruo nkeji iri atọ
iPhone XS Max IP68 Nchedo zuru oke Ruo mita abụọ miri emi ruo nkeji iri atọ
iPhone 11 IP68 Nchedo zuru oke Ruo mita abụọ miri emi ruo nkeji iri atọ
iPhone 11 Pro IP68 Nchedo zuru oke Ruo mita anọ miri emi ruo minit 30
iPhone 11 Pro Max IP68 Nchedo zuru oke Ruo mita anọ miri emi ruo minit 30
iPhone 12 IP68 Nchedo zuru oke O ruo mita isii n ’omimi ruo nkeji iri atọ
iPhone 12 Obere IP68 Nchedo zuru oke O ruo mita isii n ’omimi ruo nkeji iri atọ
iPhone 12 Ọkpụkpụ IP68 Nchedo zuru oke O ruo mita isii n ’omimi ruo nkeji iri atọ
iPhone 12 Pro Max IP68 Nchedo zuru oke O ruo mita isii n ’omimi ruo nkeji iri atọ
Mgbe iPhone gị batara na mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri ọzọ, ime ihe ọsọ ọsọ na n'ụzọ ziri ezi nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti ekwentị agbajiri agbaji na nke na-arụ ọrụ. Karịsịa, atụla ụjọ.
Ọ baghị uru n ’ọsọ ọsọ ị na - eme, ma ọ bụrụ n’amaghị ihe ị ga - eme. Damagefọdụ n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na mmiri na-emebi “ndozi” n’ezie na-emebi ihe karịa mma. Ọ bụrụ na i chere na iPhone gị bụ mmiri mebiri emebi, dobe ya n’elu ala dị larịị ma soro usoro ndị dị n’okpuru.
Tupu anyị amalite, anyị ga-achọ ịkpachara anya maka otu ihe: Akwadola ma ọ bụ maa jijiji gị iPhone, n'ihi na nke ahụ nwere ike ime ka mmiri dị n'ime iPhone gị wụfuru na mmiri ndị ọzọ ma kpatara mmebi ọzọ.
1. Wepụ Liquid Si Mpụga Gị iPhone
Ọ bụrụ na gị na iPhone bụ na a ikpe, wepụ ya mgbe ejide gị iPhone horizontally, na ihuenyo na-atụ na n'ala. Cheedị na enwere ọdọ mmiri mmiri n'ime (n'ihi na ebe ahụ nwere ike ịdị) ma ị chọghị ka ọdọ mmiri ahụ kwaga n'akụkụ ọ bụla.
Na-esote, jiri microfiber ma ọ bụ akwa dị nro ọzọ, absorbent iji kpochapụ mmiri ọ bụla na mpụga nke iPhone gị. Ejila akwa anụ ahụ, akwa owu, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike imebi ma ọ bụ hapụ ájá ma ọ bụ ihe fọdụrụ n'ime iPhone gị.
2. Wepụ Kaadị SIM
Otu n’ime ihe mbụ ị ga - achọ ime mgbe ekpuchitere iPhone gị bụ mmiri bụ iwepu kaadị SIM ya. Nke a na-arụ ọrụ abụọ nke inyere aka ịchekwa kaadi SIM n'onwe ya na ikwe ka ikuku banye na iPhone gị.
N’adịghị ka oge ochie, kaadị SIM nke iPhone anaghị enwe kọntaktị gị ma ọ bụ ozi nkeonwe gị. Ọ bụ naanị nzube ya bụ iji jikọọ iPhone gị na netwọ cellular. Ọ dabara nke ọma, kaadị SIM na-adịkarị ndụ ndụ, ma ọ gwụla ma ekpughere ha mmiri mmiri ruo ogologo oge.
esi eziga ya na lasers
Ọ bụrụ na ị nwere onye ofufe, ịnwere ike ịgbanye ikuku dị jụụ ozugbo n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ ma ọ bụ oghere kaadi SIM iji mee ka ikuku dịkwuo elu. Hapụ otutu ohere n’etiti onye ofufe na iPhone gị. Ikuku dị nro zuru ezu karịa iji nyere usoro evaporation ahụ aka. Ejila ihe eji agbapu oku ma obu ihe ozo di iche nke na-eme ikuku di oku.
3. Dabere na iPhone Gị N’ebe Dị Mkpa N’ebe Nkpọrọgwụ
Next, dina gị iPhone ihu ala na a ewepụghị elu, dị ka a kichin counter ma ọ bụ a table. Họrọ ebe nwere oke iru mmiri. Etinyela iPhone gị na akpa ma ọ bụ akpa.
Tilting gị iPhone ma ọ bụ ịtụkwasị ya na akpa na osikapa ga-fọrọ nke nta ka-eme ka mmiri na-awụsa n'elu ndị ọzọ esịtidem mmiri. Nke ahụ nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti ndụ na ọnwụ maka iPhone gị.
4. Nịm Desiccants On Top Of Your iPhone
Y’oburu n’inweta ndi icho ahia, debe ha n’elu ya na iPhone gi. Ihe ọ bụla ị na-eme, ejila osikapa! (More banyere nke ahụ mgbe e mesịrị.) Ọ bụghị ezigbo desiccant.
Gịnị Bụ Ọchịchị?
Ndị na-achọ ihe bụ ihe ndị na-emepụta ala nkụ na ihe ndị ọzọ. Enwere ike ịchọta ha n'ime obere ngwugwu ndị a na-atụnye dị ka vitamin, eletrọniki, na akwa. Oge ọzọ ị nwetara ngwugwu, chekwaa ha! Ha ga-abata na ya mgbe ị na-eche nsogbu mberede mmiri na-emebi.
5. Chere Ka Mmiri Wuputa
Ozugbo i were usoro mbu iji dozie iPhone gị, itinye ya ma pụọ ​​maka ya bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ime. Ọ bụrụ na mmiri dị n’ime iPhone gị, ikuku mmiri dị n’elu mmiri ga - enyere aka igbochi ya ịgbasa. Vinggagharị gị iPhone nwere ike na-akpata nsogbu ndị ọzọ.
Dị ka anyị ga-ekwu banyere mgbe e mesịrị, ọmụmụ sayensị egosiwo na ikpughe eletrọniki mmiri mepere emepe nwere ike ịdị irè karịa ịrapara na osikapa. Site na iwepụta kaadị SIM, anyị ahapụla ikuku ka ịbanye na iPhone gị, nke ahụ na-enyere usoro evaporation aka.
Anyị na-akwado ichere oge 24 tupu ịnwa ịgbanye iPhone gị. Apple kwuru ka ichere ma ọ dịkarịa ala awa ise. Ka oge na-aga, nke ka mma. Anyị chọrọ inye mmiri ọ bụla n'ime iPhone gị oge zuru ezu iji malite ịmalite.
6. Gbalịa ịtụgharị iPhone gị na On
Mgbe gị iPhone ka bụ na a ewepụghị elu, nkwụnye ya n'ime ike na-eche maka ya ka ịgbanwuo. Nwere ike ịnwale iji bọtịnụ ike, mana ị nwere ike ọ gaghị adị mkpa. Ọ bụrụ na icherela awa iri abụọ na anọ anyị tụrụ aro, o nwere ike ịbụ na batrị ya agaala. Mgbe nke ahụ mere, iPhone gị kwesịrị ịgbanye na akpaghị aka mgbe nkeji ole na ole na-akwụ ụgwọ.
7. Ndabere gị iPhone, Ọ bụrụ na Can Pụrụ
Ọ bụrụ na iPhone gị na-agbanye, weghachite ya ozugbo iji iCloud ma ọ bụ iTunes . Mmebi mmiri nwere ike gbasaa oge ụfọdụ, ịnwere ike ịnwe obere windo ohere ịzọpụta foto gị na data onwe gị ndị ọzọ.
8. Nzọụkwụ ndị ọzọ, Dabere na Ọnọdụ
Dabere na ebe i dobe iPhone gị, enwere ike ịnwe nsogbu ndị ọzọ chọrọ nlebara anya. Ka anyị leba anya n’otu n’otu n’otu ihe atụ atọ:
Agbadara m iPhone na ụlọ mposi!
Idobe iPhone gị n'ụlọ mposi na-agbakwunye ihe ọzọ na ọnọdụ: nje bacteria. Na mgbakwunye na isoro usoro ndị dị n'elu, anyị na-atụ aro ka ị na-eyi uwe latex mgbe ị na-ejikwa iPhone gị. Cheta iwepụ aka gị ma emesịa!
Mgbe m nọ na Apple, echetara m otu ọnọdụ ebe mmadụ nyere m ekwentị, mụmụọ ọnụ ọchị, sị, “A tụbara m n'ụlọ mposi!”
M zara, sị, “didn’t cheghị na ị ga-agwa m ihe a tupu ị bunye m ekwentị gị?” (Nke a abụghị ihe ziri ezi ikwu na ọnọdụ ọrụ ndị ahịa.)
“Ehichara m ya!” O kwuru n'amaghị ama.
Ọ bụrụ n’ịbubata iPhone gị n’ime Applelọ Ahịa Apple ma ọ bụ ụlọ nrụzi mpaghara mgbe ị tụbara ya n’ụlọ mposi, biko kpachara anya gwa onye ọrụ ntanetị na ọ bụ “ekwentị mposi” tupu i nyefee ha ha. Aga m atụ aro itinye ya na akpa mkpọchi maka njem.
Agbadara m iPhone na batrị ahụ!
Dị ka idobe iPhone gị na sink, idobe ya na bat ahụ nwere ike iweta nsogbu na ncha ncha, shampoos, na ngwaahịa ndị ọzọ. Itucha ọ bụla ebe nke gị iPhone na e gụrụ ịsa ngwaahịa na iji mmiri mgbata.
Ọ bụrụ na gị iPhone bụ mmiri mebiri emebi, dina gị iPhone na ngosi ihu ala na a ewepụghị elu na a akọrọ ebe. Wepu kaadi SIM. Jide ya n ’ihu igwe, agbatulakwa ya ma ọ bụ tichaa ya. Y’oburu n’inwe ndi ichi ahia, debe ha n’elu iPhone gi. Ejila osikapa, n'ihi na ọmụmụ sayensị egosiwo na ikuku dịkwa mma, ma ọ bụrụ na ọ ka mma. Chere elekere 24 ma mee ka mmiri puo n’onwe ya tupu ịgbalị igbanwe ya.
Enwere ọtụtụ ndozi ụlọ na 'ọgwụgwọ ọrụ ebube' ndị ọzọ nwere ike ịkwado. Agbanyeghị, anyị na-akwado ka anyị ghara ige ntị na akụkọ ifo banyere ọrụ ebube gwọọ mmadụ.
Ọtụtụ oge, ndị “gwọọkwa” nwere ike ime ihe ọjọọ karịa gị iPhone. Mgbe ụfọdụ, na-home fixes nwere ike ime ka irreversible emebi gị iPhone.
Echiche 1gha 1: Tinye iPhone Gị na Akpa Osikapa
Akụkọ ifo mbụ anyị chọrọ iberibe bụ “ndozi” a na - ahụkarị maka iPhones ndị mmiri mebiri: “Ọ bụrụ na iPhone gị nwee mmiri, tinye ya n’ime akpa osikapa.” Enwere otutu echiche banyere okwu a, yabụ anyị lebara anya na ntọala sayensị maka ịsị na osikapa anaghị arụ ọrụ.
Anyị chọtara otu nnyocha sayensị a na-akpọ 'Irè nke ndị nsị azụmahịa na osikapa a na-esighị esi n'iwepụ mmiri mmiri site na ngwa ịnụ ihe' nke na-enye ìhè n'okwu ahụ. O doro anya, ihe na-anụ ihe dị iche na iPhone, mana ajụjụ ọ na-aza bụ otu: Kedu ụzọ kachasị mma iji wepụ mmiri mmiri si elektrọnik nke mmiri mebiri emebi?
Nnyocha ahụ chọpụtara na ọ nweghị uru ọ bụla ịtinye ihe ndị na-anụ ihe na osikapa ma ọ bụ nchara nchara kama ịtọgbọ ya na tebụl na-enweghị ihe ọ bụla ma hapụ ya ka ọ kpoo. Agbanyeghị, enwere ọghọm dị na iji osikapa iji nwaa iPhone gị.
Osikapa nwere ike mgbe ụfọdụ-ebibi ihe iPhone na uzọ ọzọ nwere ike salvaged. Iberi osikapa pụrụ n'ụzọ dị mfe wedged na a headphone Jack ma ọ bụ a odori n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọdụ ụgbọ mmiri Lightning dị ka otu mkpụrụ osikapa. Ozugbo mmadu jidere n'ime ya, o nwere ike isiri ya ike, ma o nweghi ike iwepu ya mgbe ufodu.
Yabụ na anyị chọrọ ịkọwa: Etinyekwala iPhone gị na akpa osikapa. Osikapa osikapa agba aja aja ọ dịghị mkpa. Na mgbakwunye, mgbe itinyere iPhone gị n’ime akpa osikapa, i mebiela osikapa dị mma!
iphone kwuru ikwenye mmelite ogologo oge
Echiche 2gha 2: Tinye iPhone Gị Na Igwe Nri
Echiche secondgha nke abụọ anyị ga-achọ ịkọwa bụ ma ọ bụ na ọ dị mma itinye iPhone gị mebiri emebi na friza. Anyị kwenyere na ndị mmadụ na-anwa itinye iPhone ha na friza iji gbochie mmiri ịgbasa ebe niile. Agbanyeghị, ozugbo iwere iPhone gị na friza, mmiri ga-agbaze ma gbasaa na iPhone gị agbanyeghị.
Mgbe ị na-emeso nsogbu mmebi nke iPhone, anyị chọrọ iji nweta mmiri ozugbo enwere ike. Itinye gị iPhone na friza na-abụghị nke a. Ọ na-egbochi mmiri n'ime iPhone gị, na-adọba ya ma gbochie ya ịgbanahụ.
Mmiri bụ otu n’ime mmiri mmiri na-abawanye ka mmiri na-eru nso. Nke a pụtara na kefriza gị iPhone ga-amụba olu nke mmiri tọrọ atọ n'ime, na ikekwe-eweta ya na kọntaktị na mbụ undamaged mmiri.
E nwere ihe ọzọ kpatara na ikekwe ị gaghị etinye iPhone gị na friza. iPhones nwere ọnọdụ ọkọlọtọ na-arụ ọrụ n'etiti 32-95 Celsius F. Ọnọdụ okpomọkụ ha na-anaghị arụ ọrụ na-agbadata -4 Celsius F, yabụ ọ ga-adị mma itinye ya na gburugburu oyi karịa nke ahụ.
Ọkọlọtọ friza na-arụ ọrụ na 0 Celsius F, ma ha nwere ike mgbe ụfọdụ mee ka oyi. Ọ bụrụ na itinye iPhone gị na friza na -5 Celsius F ma ọ bụ oyi, ị na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ nke imebi mmebi nke iPhone gị.
Echiche 3gha 3: Fụọnụ kpọrọ nkụ iPhone gị, ma ọ bụ Tinye ya na oven! Ọ na-ehicha ntutu gị, Ọ gaghị akpọ nkụ iPhone gị?
Anwala igbu ọkpọọ mmiri nke gị iPhone. Iji igwe ọkpọ ọkụ nwere ike ime ka nsogbu ahụ ka njọ!
Igwe ikuku mmiri ga-agbanye mmiri n’ime iPhone gị. Nke a ga-ekpughe karịa nke iPhone gị na mmiri, nke bụ ihe megidere ihe anyị chọrọ ime.
Ọ bụrụ na ị na-eche itinye iPhone gị na oven iji gbalịa ịmịkọrọ mmiri na okpomọkụ, anyị agaghị akwado ya. Dabere na nkọwa Apple, iPhone XS nwere ọnọdụ ọrụ na-arụ ọrụ ruo 95 ° F (35 ° C) yana ọnọdụ na-adịghị arụ ọrụ nke ruru 113 ° F (45 Celsius C).
Ọ bụrụ na ị nwere oven nke na-ekpo ọkụ ruo 110 Celsius F, wee nwaa ya! Achọpụtara m, ma ọ dị nwute, ọnọdụ kachasị dị ala na m bụ 170 Celsius F.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ elektrọnik ndị nwere mmetụ mmiri na-emetụ n'ime iPhone gị nwere ike ịkọ na ihu igwe dị elu karịa, ihuenyo, batrị, akara mmiri na ihe ndị ọzọ adịghị ka okpomọkụ.
Echiche 4gha 4: Jiri Isopropyl Mmanya Na-eme Ka iPhone Kpoo
Mmanya Isopropyl bụ azịza ụlọ anaghị ejikarị edozi ya maka idozi mmebi mmiri iPhone. Enwere nchegbu atọ dị ukwuu mgbe ị na-etinye iPhone na mmanya isopropyl.
Nke mbụ, mmanya na-egbu egbu nwere ike ịkwụsị mkpuchi oleophobic dị na ngosipụta iPhone gị. Ihe mkpuchi oleophobic bụ ihe na - eme ka ngosi mkpịsị aka gị gosipụta. Run na-agba ọsọ n’ihe egwu nke iweda njirimara ngosipụta site na itinye iPhone gị na mmanya.
Nke abuo, a na-etinye ogwu mmanya na-egbu egbu na mmiri ọgwụ ọzọ. Ọtụtụ mgbe, ọ bụ mmiri. Site na ikpughe iPhone gị na mmanya isopropyl, ị na-ekpughere ya ọbụna mmiri mmiri karịa.
Nke atọ, mmanya isopropyl bụ ihe mgbaze pola. Nke a pụtara na ọ bụ oke eduzi. Otu nsogbu kasịnụ na mbibi mmiri bụ na ọ na-emepụta ụgwọ eletrik na ebe ekwesighi.
Ikwesiri iwepu ihe niile site na batrị iPhone gi tupu ibido itule iji mmanya isopropyl. Ighapu iPhone bu oru di egwu, choro ihe omuma ihe puru iche ma nwechapu ikike gi.
N'ihi nke a, anyị ike nye ndụmọdụ megide agbalị idozi gị mmiri mebiri emebi iPhone iji isopropyl mmanya.
Ọ bụrụ na ịmeela usoro ndị a dị n'elu ma ị ka na-enwe nsogbu, ọ bụ oge ịme mkpebi banyere otu esi aga n'ihu. Enwere otutu nhọrọ, site na ịzụta ekwentị ọhụrụ ka idozi otu akụrụngwa. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ inye gị ozi ịchọrọ iji mee mkpebi kacha mma maka gị na iPhone mebiri emebi mmiri.
Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike, ma mgbe ụfọdụ ọ gaghị enwe ike. Enweghị ike ịkọwa mmiri mmebi. ’Ll ga-enwekwu ohere ị napụta iPhone gị site na isoro usoro anyị na-akwado n'elu, mana enweghị nkwa.
Cheta na mmetụta nke mmebi mmiri anaghị adị ngwa ngwa. Dị ka mmiri mmiri na-abanye n'ime iPhone, ihe ndị na-arụ ọrụ nwere ike ịkwụsị na mberede. O nwere ike ịbụ ụbọchị ma ọ bụ izu rue mgbe nsogbu bidoro ime.
Akpa Ntụle: Have nwere AppleCare + Ma ọ bụ Insurance?
Ọ bụrụ na ị nwere AppleCare + ma ọ bụ mkpuchi site na ikuku gị, bido ebe ahụ. AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile na ndị ọzọ na-ebu ụgbọ elu ha niile na-enye ụfọdụ ụdị mkpuchi. ’Ll ga-akwụrịrị ego, ma ọ na-akwụkarị ụgwọ dị ala karịa ọnụahịa nke iPhone ọhụrụ.
Otú ọ dị, Ọ bụrụ na ị nwere ekwentị ochie na ị na-achọ ihe mere ị ga-eji kwalite, mgbe ahụ, nke a nwere ike ịbụ oge zuru oke. Ihe a na - ewepu ego maka ndi ozo bu otutu ego kariri inye ego ohuru iPhone na ugwo ugwo.
Banyere AppleCare +
AppleCare + na-ekpuchi ihe ruru “ihe abụọ” nke mmiri mmiri ma ọ bụ mmebi ọghọm ndị ọzọ, jiri ụgwọ ọrụ $ 99. Ọ bụrụ na ịnweghị AppleCare +, mmezi nke na-enweghị ikike maka mmebi mmiri nwere ike ịdị oke ọnụ.
Apple anaghị arụzi ihe dị iche iche na iPhones mebiri emebi - ha dochie ekwentị niile. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike iyi ka ọ bụ nnupụisi, ihe kpatara ha ji mee nke ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya.
Ọ bụ ezie na onye ọ bụla akụkụ nwere ike mgbe ụfọdụ rụzie, mmiri mmebi bụ tricky na mgbe mgbe na-akpata nsogbu ala n'okporo ụzọ dị ka mmiri na-agbasa ofụri gị iPhone.
Site na Apple, ọ gaghị ekwe omume ịnye akwụkwọ ikike na iPhone nke nwere ike ịgbaji na-enweghị ịdọ aka ná ntị. Ka ga-akwụ obere ego iji dochie iPhone site na AppleCare + ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ ego.
Nke ahụ kwuru, na ọkachasị nke enyere ọnụ ahịa nke nrụzi site na Apple, ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ụlọ ahịa mmezi nke na-edozi akụkụ ọ bụla nwere ike ịbụ nzọ gị kacha mma. Dị nnọọ mara na dochie ọ bụla akụrụngwa na gị iPhone na a na-abụghị Apple akụkụ ga-kpamkpam adabaghị gị akwụkwọ ikike.
Akwụ ụgwọ Mmezi Apple Water
Ọpụghị akwụkwọ ikike
Na AppleCare +
iPhone 12 Ọkpụkpụ $ 549.00 $ 99.00
iPhone 12 Obere $ 399.00 $ 99.00
iPhone 8 gbakwunyere $ 399.00 $ 99.00
iPhone 7 gbakwunyere $ 349.00 $ 99.00
iPhone 6s gbakwunyere $ 329.00 $ 99.00
iPhone 6 gbakwunyere $ 329.00 $ 99.00
Ekwentị 6 $ 299.00 $ 99.00
iPhone Ghaat $ 269.00 $ 99.00
iPhone 5, 5s, na 5c $ 269.00 $ 99.00
Ekwentị 4 $ 149.00 $ 99.00
iPhone 3G na 3GS $ 149.00 $ 99.00
Banyere Insurance Insurance
AT&T, Sprint, T-Mobile, na Verizon na-eji ụlọ ọrụ akpọrọ Asurion iji nye ndị ahịa mkpuchi ekwentị. Atụmatụ Asurion na-ekpuchi mkpuchi mmiri mmiri. Mgbe ị debanchara nkwupụta, Asurion na-anọchi ngwaọrụ mebiri emebi n'ime awa 24, ọ bụrụhaala na ọ kpuchiri ya n'okpuru akwụkwọ ikike.
Ndị a bụ ụfọdụ njikọ bara uru ma ọ bụrụ na ịnwe mkpuchi ụgbọelu ma ọ ga-amasị ịdebanye nkwupụta maka mmebi mmiri:
Onye na-ebu ụgbọ mmiri
AT&T Kpee Nkwupụta Insurance Repnye ngbanwe ekwentị
T-ekwentị Kpee Nkwupụta Insurance - Nchedo ekwentị Nnọchi Protectionnye ọnụahịa
- Basic Device Protection ekwentị Nnọchi ricnye ọnụahịa
- Adịchaghị Handset Protection (akwugo ugwo) Ekwentị Nnọchi Pnye ọnụahịa
Verizon Nye Nkwupụta Repnye ngbanwe ekwentị
Ọ bụrụ na i jiri ọnụ ahịa ekwentị ọhụrụ tụnyere ego iji dochie otu akụkụ, mgbe ụfọdụ, ịnọchi anya otu akụkụ bụ ụzọ ị ga-esi gaa. Ma mgbe ụfọdụ ọ bụghị.
Ọ bụrụ na iPhone gị fọdụrụnụ dị mma ma ekwentị gị dịkwa ọhụrụ, mgbe ahụ mmezi nwere ike ịbụ nzọ gị kachasị mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na mmiri mebiri emebi bụ ọkà okwu ma ọ bụ akụkụ ọzọ dị ọnụ ala.
Dochie iPhone dum nwere ike ịbụ ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na ihe karịrị otu akụrụngwa agbajiri ma ọ bụ na ọ gaghị agbanye ma ọlị. Ọ ga-abụ obere isi ọwụwa ma nwee ike ịdị ọnụ ala karịa dochie ọtụtụ akụkụ gbajiri agbaji.
Mgbe ọ bụla ị zụrụ ekwentị ọhụrụ, ị nwere nnukwu ohere ịchekwa ego. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị nọrọ na onye na-ebu ha ugbu a na ndabara, n'ihi na ịtụle ọnụ ahịa n'ofe ndị na-ebu ya na-agwụ ike ma na-ewe oge.
Anyị mepụtara UpPhone iji dozie nsogbu ahụ. Weebụsaịtị anyị nwere injin nchọta nke na - eme ka ọ dị mfe tulee ekwentị ọ bụla na atụmatụ ekwentị ọ bụla dị na United States, otu akụkụ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na obi dị gị ụtọ na onye na-ebu gị ugbu a, ọ nwere ike ịba uru ileba anya na atụmatụ kachasị ọhụrụ ha na-enye. Ọnụahịa agbadaala ka asọmpi abawanye, ndị na-ebu ahịa anaghị ekwe ka ndị ahịa ha ugbu a mara mgbe ha nwere ike ịchekwa ego.
Na-ina Repair Ọrụ
Na-achọ, 'anyị na-abịakwute gị' ụlọ ọrụ nrụzi nke atọ bụ nhọrọ dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị danyere iPhone na mmiri. Ọtụtụ n'ime ọrụ ndozi ndị a nwere ike izigara mmadụ onye na-erughị otu awa.
Pulse bụ otu n'ime ọkacha mmasị anyị na-achọ ọrụ mmezi. Ha nwere ike izipu onye ọrụ aka ama enyere aka na ọnụ ụzọ gị dị ka nkeji iri isii, ma nye gị ikike ndụ niile na ọrụ niile.
Pslọ Ọrụ Mmezi Obodo
Mpaghara gị 'Mama na pop' ụlọ nrụzi iPhone bụ ụzọ ọzọ iji nweta enyemaka ozugbo ma ọ bụrụ na idobe iPhone gị na mmiri. Nsogbu bụ na ọ gaghị arụsi ọrụ ike dị ka Storelọ Ahịa Apple, ọ na-abụkarị na ị gaghị enwe oge ịhọpụta.
Agbanyeghị, anyị na-akwado ị kpọ ha oku tupu ị banye na ụlọ ahịa ahụ. Ọ bụghị ụlọ ọrụ nrụzi ọ bụla na-edozi iPhones mebiri emebi, na mgbe ụfọdụ, ụlọ ahịa dị na mpaghara anaghị enwe akụkụ nke ọ bụla na ngwaahịa. Ọ bụrụ na gị obodo idozi shop na-atụ aro ịrụzi multiple akụkụ nke gị iPhone, nwere ike ị chọrọ iji tụlee ịzụta a ọhụrụ ekwentị.
Ọrụ Ndozi Ozi-Na
Nwere ike izere ozi-na ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-eche gị iPhone nwere mmiri mmebi. Mbupu gị iPhone nwere ike ikwanye ya gburugburu na dịkwuo ize ndụ nke mmiri na-agbasa ofụri iPhone.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na iPhone gị kpọrọ nkụ ma ọ naghị adịghachi ndụ, ọrụ ndozi mail na-enwekarị oge ntụgharị nke naanị ụbọchị ole na ole ma nwee ike ịba ihe karịa nhọrọ ndị ọzọ.
Enwere m ike idozi iPhone mebiri emebi mmiri Onwe m?
Anyị anaghị atụ aro ịnwa ịmezi iPhone mebiri emebi na nke gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya na mbụ. O nwere ike isi ike ịmata ihe akụkụ nke iPhone gị mkpa n'ezie ka edochi anya. O nwedịrị ike isiri ike ịchọta akụkụ dị iche iche na-anọchi anya ya.
Ighapu iPhone gị chọrọ otu ngwaọrụ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị ihe dị egwu, ịnwere ike ịzụta ihe iPhone mmezi kit na Amazon maka ihe na-erughị $ 10.
Enwere m ike Ree A iPhone mebiri emebi iPhone?
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ga-azụta iPhones nke mmiri mebiri emebi iji weghachite ha n'enweghị nsogbu ma ọ bụ chekwaa akụkụ ndị ka na-arụ ọrụ. Eleghị anya ị gaghị enweta ọtụtụ, mana ọ ka mma karịa ihe ọ bụla, na enwere ike itinye ego ahụ ịzụta ekwentị ọhụrụ.
Lelee ederede anyị maka iji atụnyere ebe ị nwere ike ere gị iPhone .
Iji Nchikota Banyere Mmezi Nhọrọ Gị
Dịka anyị kwuru na mbụ, oge ụfọdụ nhọrọ kacha mma bụ nweta nkwalite na iPhone ohuru , karịsịa ma ọ bụrụ na ekwentị gị dị ugbu a ga-efu nnukwu ego iji rụkwaa. Ọ bụla iPhone kemgbe iPhone 7, na ọtụtụ ndị ọhụrụ Androids, dị ka Google Pixel 3 na Samsung Galaxy S9, na-eguzogide mmiri.
Otú ọ dị, ọ bụ gị ka ọ dịịrị ịhọrọ. Malite site na nyocha mkpuchi mkpuchi gị, wee gaa na ịnye ọnụahịa nrụzi. Anyị maara na ị ga-eme mkpebi ziri ezi.